मानिसजस्तै रोबोट, कस्तो प्रभाव पर्ला प्राकृतिक व्यक्तिलाई ? | Chhinchhin Khabar
मानिसजस्तै रोबोट, कस्तो प्रभाव पर्ला प्राकृतिक व्यक्तिलाई ?
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०९:५८
काठमाडौं– प्रविधिको विकाससँगै नयाँ नयाँ कुरा आविस्कार हुने क्रम जारी छ । यसैबीच वैज्ञानिकहरूले मानिसजस्तै रोबोट बनाएका छन् । डा. बेन गोएर्टजेलले एक आर्टि्फिसियल इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयर तयार गरेका हुन् । यसकै आधारमा सोफिया नामको रोबोर्ट तयार भयो, जुन मानवजस्तै देखिने रोबोट हो ।
हङकङस्थित कम्पनी ह्यानसन रोबोटिक्सले यसको निर्माण गरेको हो । रोबोट मानिसजस्तै देखिनुपर्ने डा. गोएर्टजेलको भनाइ छ । यसले मानिसमा रोबोटप्रतिको सन्देश हट्ने उनी बताउँछन् । ‘‘आगामी दिनमा रोबोट मानिसजस्तै हुनेछ र यसलाई मानिसले मन पराउने छन् उनी भन्छन्, ‘‘मलाई लाग्छ, सफ्टबैङ्कको पेपर रोबोट नराम्रो देखिन्छ । तर सोफिया तपाईंको आँखामा हेर्ने्छिन् र यिनले तपाईंको जस्तै अनुहार बनाउन सक्छिन् ।
यो नितान्त नौलो अनुभव हुनेछ, पेपर रोबोटको छातीमा रहेको मनिटरमा हेर्नुभन्दा ।’’अहिलेसम्म २० वटा सोफिया रोबोट बनिसकेको छ, जसमध्ये ६ वटा संसारभर प्रयोगमा छ । यी रोबोटको प्रयोग भाषण गर्न र प्रविधि प्रशिक्षणमा गरिएको छ । थुप्रै कम्पनीहरुले ग्राहक आकर्षित गर्नका लागि सोफिया प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ह्यानसन रोबोटिक्समा सम्पर्क गरेका छन् । तर के स्ष्ट छ भने, चाहे सोफिया होस् चाहे पेपर रोबोटजस्तै मानव रोबोट, अहिले पनि यसको निर्माण निकै महँगो पर्छ ।
रोबोटिस्ट मसाहिरो मोरीको विचारमा रोबोट जति मानिसजस्तै हुँदै जान्छ उति नै त्यसबाट डराउनुपर्ने हुन्छ र त्यो विद्रोही हुने डर हुन्छ । नैतिक रुपमा पनि रोबोट मानिसजस्तै हुने कुराको कल्पना नै गलत छ । आगामी दिनमा यस्तो स्थिति पनि आउला, जहाँ रोबोटमा चेतना, मन पराउने–नपराउने स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकार पनि होला ? डा. गोएर्टजेल भन्छन्, ‘‘मलाई लाग्छ, रोबोट पनि मानिसजत्तिकै समझदार हुँदा उसमा चेतना पनि हुनेछ ।’’
विभिन्न प्रकारका रोबोटहरुको निर्माणले मानिसको रोजगारीमाथि धावा बोलिरहेका छन् । श्रमजीवीका लागि आगामी दिन असुरक्षित रहेको आशङ्का तीव्र भएको छ । मानिस स्वयम् आफूमाथि खतरा निर्माणमा लागेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
Previous articleपारसले भने–नराम्रो खेलका लागि खेलाडी नै जिम्मेवार छौं
Next articleब्राजिलको जेलमा कैदीबीच भिडन्त, ५२ को मृत्यु
आफैंले उत्पादन गरेको धानको मूल्य तोक्न पाउँदैनन्, किसान
संविधान कार्यान्वयन विना स्थानीय निर्वाचन गर्न असम्भव